होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई डाक्टर तोषिमाको १० वटा टिप्स – मिलिजुली खबर
होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई डाक्टर तोषिमाको १० वटा टिप्स
in गृहपृष्ठ, जीवनशैली, फिचर, समाज, स्वास्थ्य
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर शुरु भएसँगै संक्रमण हुनेको संख्या निकै बढेको छ । अस्पतालका बेड भरिएका छन् । होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
होम आइसोलेसनमा बस्दा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानाैँ, धुलिखेल अस्पतालकी डाक्टर तोषिमा कार्कीबाट
क.घरमा बस्दा कोरोना संक्रमितले खाने औषधि
१.सिटामोलः ५ सय एमजीको, एकदेखि दुई चक्कीसम्म दिनको ३ पटक, ५ दिनसम्म खाने (ज्वरो आएको बेला र जीउ गले जस्तो भएमा सिमाटोल खान सकिन्छ)
२. जिंक चच्कीः हरेक दिन विहान एक चक्की, दुईहप्ता सम्म खाने ।
३.भिटामिन सीः बिहानको खाना खाएपछि हरेक दिन एक चक्कीका दरले दुईहप्तासम्म खाने ।
४. कफ सिरफः खोकीको लक्षण छ भने १० एमएल, आठ घण्टाको फरकमा ३ पटक खाने । निरन्तर सुख्खा खोकी लागिरहेको छ भने राति सुत्ने बेला खाना आइसकेपछि ५ एमजीको लिभोस सिट्रिजिन चक्की कम्तिमा एक हप्ता खाने ।
५.तातोपानीको बाफः दिनको ३ देखि ४ पटकसम्म २० मिनेट जति तातो पानीको बाफ लिनुपर्छ । पानीको बाफ लिदाँ नाक सास लिने र मुखबाट छोड्ने गर्नु पर्दछ । यसले फोक्सो नलिहरुलाई खुलाउने र सास फेर्न सजिलो बनाउने काम गर्दछ ।
६. नियमित ब्यायमः शरीरलाई बिसन्चो भएपनि आफुले सक्ने खालको ब्यायमलाई जारी राख्नु पर्दछ । अरु केहि नसकेपछि लामो लामो सास तर्ने र छोड्ने विधिले पनि हाम्रो छातीलाई चलायमान गराइराख्छ । अक्सिजनको मात्रा शरीरलाई पुर्याउन मद्दत पुग्छ ।
७.सुताईः सामान्यतय हामी सुत्ने बेला उत्तानो परेर सुत्छाैँ । तर कोरोना संक्रमित घोप्टो परेर सुत्दा राम्रो हुन्छ ।
८.पल्स अक्सिमिटरः यो सबै जसो घरमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यो मिसन औलामा राखेर आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा जानकारी लिन सकिन्छ । होम आइसोलेसनमा बस्दा कम्तीमा ९४ भन्दा बढी हुनुहुन्छ । त्यो भन्दा कम भएमा तत्काल अस्पताल जानु पर्दछ ।
९.ज्वरो नाप्नेः होम आइसोलेसनमा बस्दा ज्वरो पनि बेला बेला नापिरहनुपर्छ । यसका लागि पनि कम मुल्यमा ज्वरो नाप्ने मेसिन किनेर घरैमा राख्नु पर्ने हुन्छ । बिहान र बेलुका नियमित रुपमा ज्वरो नाप्ने गर्नुपर्छ ।
१० प्रशस्त पानी पिउनेः होम आइसोलेसनमा बस्दा पानी प्रशस्त पिउनु पर्छ । यदि शुद्ध पानी मात्रै पिउन मन लाग्दैन भने सुप, दालको रस पिउँदा पनि हुन्छ । दैनिक ३ देखि ४ लिटरसम्म पानीको मात्रा शरीर आवश्यक पर्छ ।
के भए अस्पताल जाने ?
१. सास फेर्न गाह्रो भएमा
३.शरीरमा अक्सिनको मात्रा ९२ भन्दा कम भएमा
५.नयाँ किसिमको लक्ष्यण देखिए तत्काल अस्पताल वा चिकित्सिकको परामर्श लिइहाल्नु पर्छ ।
डाक्टर तोषिमा कार्कीले आफ्नो फेसबुकवालमा राखेको भिडियोबाट तयार पारिएको सामग्री
काभ्रेमा निषेधाज्ञा कहिले जारी होला ?
पाँचखालको लाखापुरमा बुद्ध पार्क निर्माणको काम धमाधम